Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem]
1 Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 11th November 2009, 3:07 pm
Firefox မှာ Download လုပ်တဲ ့အခါ Speed မြန်မြန် နဲ ့Download လုပ်ချင်ပါ တယ်။ သိတဲ ့သူ ရှိ ရင်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ခင်ညာ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 11th November 2009, 4:00 pm
Internet Download Manager(IDM)နဲ. ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လုပ်ရင် speed ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်။ software သွင်းပြီးရင် link ကို right click လုပ်ပြီး Download with IDM ကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
3 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 11th November 2009, 7:59 pm
Firefox မှာ Software မသွင်းဘဲ နဲ ့Download Speed မြန်အောင်လုပ် လို့ရတဲ ့တခြားနည်းလမ်း ရှိပါ သလား ခင် ဗျာ။
သိတဲ ့သူရှိ ရင် ဖော်ပြပေး ပါ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 12th November 2009, 5:29 pm
download ကိုမြန်အောင်တော့နိုင်ငံခြားမှာနေမှရမယ်ထင်တယ်(idm မသုံးဘူးဆိုရင်ပေါ့)
5 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 1st December 2009, 3:07 pm
ဟုတ်တယ် မြန်အောင်လုပ်လို့ ရတယ် .. Adress Bar မှာ :config လေး ရိုက်ပြီး အထဲမှာပြင်ရတာထင်တယ် .. ကျနော်လည်း မေ့သွားပြီ
နဂိုကတော့ စမ်းဖူးတယ် .. အခုတော့ မှတ်ထားတာလည်း မရှိတော့ဘူး ..
ဘာဖြစ်လဲ IDM နဲ ့ဆွဲပေါ့ .. ပိုတောင်ကောင်းသေး .. ဟုတ်ဘူးလား [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 1st December 2009, 3:23 pm
regedit ထဲမှာ ပြင်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာလည်းမသိဘူး။ဖတ်ဖူးတယ်။ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
7 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 1st December 2009, 4:06 pm
firefox နဲ ့ပတ်သတ်ပြီး ကျနော်စုထားတာလေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်
firefox browser ကိုနှစ်ဆ မြန်အောင် speed up လုပ်ခြင်း
မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ Application တစ်ခုခုကြောင့် Page Loading
ရုတ်တစ်ရက်ရပ်တန့် ခြင်းကို တုန့်ပြန်မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို Right Click (apple User များ - Ctrl click) ပေးပါ။ New မှတစ်ဆင့် Boolean ကို ရွေးပါ။ New Boolean Value Pop-up Window ထဲမှာ Content.interrupt.parsing ကိုတည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ New Boolean အတွက် Value ကို True ကိုရွေးပါ။ Ok ပေးပါ။
၀ဘ်စာမျက်နှာတွေဖွင့်တိုင်းမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာမရောက်မှီ
အမှန်တစ်ကယ် မလိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ အများအပြား ကိုပါ မီးမြေခွေးက
ဒေါင်းလုဒ်ချ လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စောင့်ဆိုင်း ချိန်
အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ downthemall addon လေးပါ
ရှိသမျှကို အကုန်ဒေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်.... IDM နဲ ့ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်
download speed ကတော့ထူးမခြားနာပါ..ဒါပေမဲ့
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်ကလင့်က ယူလိုက်ပါ
ဒီအောက်ကလင့်ခ် ကတော့..Gmail ကို mediaplayer လို အလှဆင်ပေးတဲ့ addon ပါဗျာ
ဒီအောက်ကတော့.. firefox shortcut ပါ
တင်ပြီးသားဆိုလဲ ဆောဒီး ပါ
Back = Alt Left Arrow OR Backspace
Forward = Alt Right Arrow OR Shift Backspace
Home = Alt Home
Open File = CtrlCmd O
Reload = F5 OR Ctrl R
Reload (override cache) = Ctrl F5 OR Ctrl Shift R
Go to Bottom of Page = End
Go to Top of Page = Home
Move to Next Frame = F6
Move to Previous Frame = Shift F6
Page Info = Ctrl I
Page Source = Ctrl U
Save Page As = Ctrl S
Text Size: Decrease = Ctrl -
Text Size: Increase = Ctrl
Text Size: Restore = Ctrl 0
Redo = Ctrl Y
Find Again = F3 OR Ctrl G
Find As You Type Link = '
Find Previous = Shift F3
Web Search = Ctrl K OR Ctrl E
Close Tab = Ctrl W OR Ctrl F4
Close Window = Ctrl Shift W OR Alt F4
Move Tab Left(when tab is focused) = Ctrl Left Arrow OR Ctrl Up Arrow
Move Tab Right(when tab is focused) = Ctrl Right Arrow OR Ctrl Down Arrow
Move Tab to Beginning(when tab is focused) = Ctrl Home
Move Tab to End(when tab is focused) = Ctrl End
New Tab = Ctrl T
New Window = Ctrl N
Next Tab = Ctrl Tab OR OR Ctrl Page Down
Open Address in New Tab(from Location Bar or Search Bar) = Alt Enter
Previous Tab = Ctrl Shift Tab OR Ctrl Page Up
Undo Close Tab = Ctrl Shift T
Select Tab (1 to = Ctrl (1 to
Select Last Tab = Ctrl 9
Bookmark All Tabs = Ctrl Shift D
Bookmark This Page = Ctrl D
Bookmarks = Ctrl B OR Ctrl I
Caret Browsing = F7
Downloads = Ctrl J
History = Ctrl H
Clear Private Data = Ctrl Shift Del
Complete .com Address = Ctrl Enter
Complete .net Address = Shift Enter
Complete .org Address = Ctrl Shift Enter
Delete Selected Autocomplete Entry = Del
Select Location Bar = Alt D OR F6 OR Ctrl L
Select or Manage Search Engines(when Search Bar is focused) = Alt Up Arrow OR Alt Down Arrow OR F4
Last edited by solakoko on 16th September 2010, 10:51 am; edited 1 time in total
8 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 1st December 2009, 4:07 pm
cheer bro !
keep it up more & more
9 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 1st December 2009, 4:37 pm
solakoko က အခုလို ပြောပြပေးတာကို ကျေးဇူးပါ ဗျာ။ Thanks Button ကို နှိပ််လိုက်တယ်နော်။ နောင်လဲ အခု လို ဘဲ များများရှင်းပြပေးနိုင်ပါစေဗျာ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 1st December 2009, 5:03 pm
11 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 4th December 2009, 9:59 pm
ပြောင်းလိုက်ပါသည်။ အထွေထွေမှ networking & internet သို ့။
၄.၁၂.၀၉ ။ ၁၁း၂၄ PM
12 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 5th December 2009, 9:49 am
bo bo wrote: Firefox မှာ Download လုပ်တဲ ့အခါ Speed မြန်မြန် နဲ ့Download လုပ်ချင်ပါ တယ်။ သိတဲ ့သူ ရှိ ရင်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
solakoko က အခုလို ပြောပြတာ ကောင်း တယ် ဗျျိ.
ဟီး ကြေ ငြာ ၀င် လိုက် အုံး မယ်
ှOptimizer Software တွေ ပါ ready made ပါ
Last edited by Fox on 7th August 2011, 3:02 am; edited2times in total (Reason for editing : Code ခံကြပါ။)
13 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 5th December 2009, 8:37 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-12-03
14 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 6th December 2009, 10:04 am
ဟဲ ဟဲ .. ခုလို ၀င်ရှင်းပြပေးတဲ့ solakoko ကို ကျေးဇူးပါ .. ကျနော်လည်း မေ့နေလို့ အတော်ပဲ .. ခုတော့ လိုချင်တာလေး ပြန်ရသွားပြီ .. ဟိ ဟိ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem] on 16th September 2010, 10:42 am
တည်နေရာ : Bogalay
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-09-03
16 Re: Mozilla Firefox မှာ Download Speed မွနျခငြျ ပါတယျ [Problem]